Caalamka:-Isbarbar Dhigga Awoodda Milatari Ee Dalalka Hindiya Iyo Pakistan. | Waxsansheeg News
You are here : Waxsansheeg News » War » Caalamka:-Isbarbar Dhigga Awoodda Milatari Ee Dalalka Hindiya Iyo Pakistan.
Caalamka:-Isbarbar Dhigga Awoodda Milatari Ee Dalalka Hindiya Iyo Pakistan.
Posted by Nuux Abdi on March 1st, 2019 08:02 AM | War
Ra’iisul wasaaraha Hindiya Narendra Modi ayaa xilligaas wacad ku maray in waddankiisu uu jawaab kulul ka bixin doono weerarka loo geystay ciidankooda oo ahaa kii ugu khasaaraha badnaa ee dhaca muddo tobannaan sano ah. Dowladda Pakistan ayaa si kale u dhigtay howlgalka ay Talaadadii sameeyeen diyaaradaha milatariga Hindiya, iyadoo sheegtay in lagu soo xad gudbay hawada dalkeeda, gaar ahaan hawada u dhow xadka ay ku kala qeybsadeen gobolka ay isku heystaan ee Kashmiir.
Labada waddanba waxay heystaan gantaallada goomaha ka sameysan ee awoodda u leh iney xambaaraan hubka nuclear-ka. Hindiya waxay heysataa sagaal nooc oo ka mid ah gantaallada la isticmaali karo, waxaana ka mid ah nooc loo yaqaanno Agni-3, kaasoo gaari kara masaafe dhan 3,000km ilaa 5,000km, sida ay sheegtay xarunta qorsheynta daraasadaha caalamiga ah ee (CSIS), oo fadhigeedu yahay magaalada Washington. Gantaallada ay haysato Pakistan oo dhismahooda ay ka caawisay dowladda Shiinaha waxaa ka mid ah kuwa riddada gaaban iyo riddada dhexe oo gaari kara meel kasta oo ka mid ah Hindiya, sida ay sheegtay CSIS. Gantaallada ay Pakistan heysato waxaa ugu masaafe dheer mid lagu magacaabo Shaheen 2 oo gaari kara ilaa 2,000km. Pakistan ayaa heysata 140 ilaa 150 madax oo hubka nuclear-ka ah halka Hindiyana ay heysato 130-140 madax oo nuclear ah, sida laga soo xigtay hay’adda SIPRI.
Hindiya waxay heysataa 1.2 milyan oo askari, kuwaasoo ay taageerayaan 3,565 oo taangiyada dagaalka ah, 3,100 oo ah gaadiidka loogu tala galay ciidanka lugta ku dagaallama, 336 gawaarida gaashaan ee saraakiisha lagu qaado ah iyo 9,719 oo ah madaafiicda goobta ee loo yaqaanno artillery-ga, sida ay sheegtay IISS. Ciidamada Pakistan oo tiradaas aad uga yar ayaa gaaraya 560,000 askari oo ay taageerayaan 2,496 taangi, 1,605 oo baabuurta gaashaaman ah iyo 4,472 madaafiicda goobta ee artillery-ga ah, kuwaasoo ay ka mid yihiin 375 hoobiye.
« Guumaysiga Qarsoon Ee Itoobiya. W/Q: Mr. Hamse Bashe (Wiyeer-yare)
Ciidamada dowladda oo soo badbaadiyay dad da’ah oo ku go’doonsanaa dhismayaashii xalay la weeraray »